Dhaliisha iyo Waanada waa Lagu Dhismaa ee Yaan La Dhibsan, Muuse Biixi na Ha Loogu Dhaarto Middaas Hadduu Diido. W/Q. Aadan Cali Bile
Monday June, 18 2018 - 22:05:37
Ma khaldame waa Ilaahay oo keliya, wixii ka soo hadhana waxa loogu daw galay dhacdhac iyo gef aa xaddidnayn oo xilli walba ka dhaca. Dadka ugu seegseegga badani waa madaxda aynu dooranno ee aynu farteenna wax kaga dhigno. Muwaaddin kastaaba wuxuu xuquuq dastuuriya u leeyahay inuu la xisaabtamo dadka u haya xilalka kala duwan ee qaranka, aniguna muwaaddiniinta reer Somaliland ayuunbaan ka mid ahay oo garan maayo sharci iyo xeer aan jebinayo haddaan la xisaabtamo madaxdaydii aan doortay ee uu ugu horreeyo Madaxwaynaha JSL Mudane. Muuse Biixi Cabdi.
Tiro ba afar xukuumadood oo ka horreeyay xukuumadda Muuse Biixi waynu ogayn sida loo dhaliili jiray ee loo toosin jiray, isaguna wuxuun buu wax la qabaa madaxdii ka horraysay ee uu ugu dambeeyay Axmed Siilaanyo. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) wuxuu ahaa madaxweynihii loogu maagista iyo cayda badnaa, ilaa lagaadhay heer wax laga sheego xaaskiisa. Ma doonayo inaan imika idinla wadaago caddaymaha ka marag kacaya sida masuulkaa loo dhibay ee aan waxba loogula hadhin intii uu hayay xilka madaxweyne oo ku siman 7 sano oo keliya (2010 kii ilaa 2017 kii)
Waa sunnaha dawladda iyo dimuqraadiyadda inuu muwaaddinku wax dhaliilo, wixii uu qoonsadana aanu ka aamusin ee uu qalinka ku duugo si uu xaqdarradaa u suuliyo oo uu meesha uga saaro. Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa ' nin durbaan qaatay ilaaq dalbay', ee Madaxweyne Muuse Biixi waxaan leeyahay 'nimay ku hadhay hawli haysaaye markaagii ayaa la soo gaadhee adna waa inaad u diyaar garawdaa inay kula xisaabtamaan dadkii ku soo doortay ee uu codkoodu Madaxwaynaha kaa dhigay'. Dhaliisha waa inaanad u nuglaan ee aad qolof diin u yeelataa, waa inaanad cabudhin dhallinyarada aan ka midka ahayn ee afkaartooda cabbiri doonta, waa inaad yeelataa sammir iyo dulqaad ka badan kii ay lahaayeen madaxdii kaa horraysay, waayo waxa aad yeelan doontaa dad ka badan intii dhaliili jirtay hortaa jire Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo). Kalsooni wayn kuma qabo inuu Muuse Biixi yeelan doono dulqaad uu dadkeenna isugu wadi karo, waayo isagoo aan laba bilood joogin ba waxaynu aragnay inuu xidhay muwaaddinkii ugu horreeyay ee xukuumaddiisa dhaliila, kaas oo ah wiil dhallinyaro ah oo ka soo jeeda Beesha Bariga Burco. Hadda ogow oo weli lasyma gaadhin oo sidaa kumay hadal Cali Gureygii iyo Ismaaciil Yarihii Beeshu.
Asxaab aanan imika cadadkooda halkan ku soo wada koobi karayn ayaa iila soo xidhiidhaysa si sira, kuwaas oo igaga cabanaya inaan ku degdegay dhaliisha xukuumadda oo imika aan waqtigeedii weli la gaadhin. Walaalahaygaa waxaan leeyahay, dhaliishu kursigay la kowsataa ee ma aha wax sed leh oo xilli ku xidhan. Dhaliishuna igama aha nacayb aan madaxdayda necbahay, ee waa iga nasteexo iyo toosin, waayo aniguba dadka Ilaahay waxaan ugu jeclahay qofka wax ii sheega ee igu dhaha waar waxaasaa kaa khaldane is hagaaji.
Ugu dambayn, si ay Somaliland u sii socod barato, haddaan arrin qoonsado way adagtahay sida aan u qarsadaa. Sidaa awgeed, masuul kaleba ha ii joogee, Wasiirka aannu isku beesha hoose ka soo wada jeedno ee eeddaday Marwo. Hinda Gaanni hadday ka gaabiso gudashada waajibaadka qaranka waxa igu ballana oo aan idiin sheegayaa inaanan ka gaabsan doonin, si aydaan isuba odhan ama aydaan iiguba malayn inaan ahay nin difaaca madaxda reerkiisa, kuwa reeraha kalena goor walba dhaliishooda u xaydan.